देह राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख ३, २०७६ सरिता तिवारी
काठमाडौँ — अहिले सबैभन्दा फलेफुलेको बजार हो— स्त्रीदेह–बजार । शरीर एउटा जैविक अस्तित्वमात्रै रहेन अब, यो पुँजी निर्माणको खासा ‘माल’ भएको छ । यो अलिक अप्रिय सुनिन्छ । कम्तीमा विगत आधा शताब्दीयता वैश्विक अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पारेको यो बजारले शरीरलाई सम्मानित जैविक रूप मान्दैन ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी र पराराष्ट्रिय व्यापार–सञ्जालमा स्त्रीको शरीर आर्थिक उत्पादनको सबैभन्दा गतिशील माध्यम बनिरहेको तथ्य छर्लङ्गै छ । स्त्रीदेहलाई सम्पूर्णमा वा खण्डमा बाँडेर सुन्दरताका नयाँ–नयाँ मिथ बनाउँदै ‘प्रोडक्ट’हरूको निष्कंटक व्यापार गर्ने सिलसिला बढेको मात्रै छैन, रूपान्तरसमेत हुँदै गएको छ ।
प्राचीन सौन्दर्य मिथहरू स्त्री शरीरमाथि मात्रै होइन, पुरुष शरीरमाथि पनि रचिएका छन् । तिनमा सौन्दर्यका जैविक आग्रह बढी छन् । त्यसैले परम्परित सबै सौन्दर्य मूल्यको आलोचना गर्नु गलत हुनसक्छ । सांस्कृतिक मानक निर्माणको चरणमा सौन्दर्यजस्तो अमूर्त विषयको ग्रहण र अभ्यासमा जनसामान्यका कल्पना र पौरखको ठूलो भूमिका छ । तर समय बित्दै जाँदा सौन्दर्य सम्बन्धी धारणालाई स्त्री वर्गको आत्मसम्मान र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि अङ्कुश लगाउन उपयोग गर्न थालियो ।
उपेक्षा र दमनको साध्यका लागि उत्पीडनकारी मानक तय हुनथाले । सहनशीला, सुशीला र बत्तीस लक्षणा लगायतका भाष्य बन्न थाले । यो सिलसिला अधिकृत पितृसत्ताको जन्म सँगसँगै थालिएको हो । त्यसैले देह राजनीतिमाथि आलोचनाको आधारबिन्दु परिवार–संगठन, राज्यको निर्माण र यिनको शक्तिमाथि पितृसत्ताले एकछत्र कब्जा गरेताको झन्डै दस हजार वर्षको इतिहासमा जोडिन्छ ।
जताबाट पनि पितृसत्ताको इतिहासलाई नछोई महिलामाथिको शारीरिक र सांस्कृतिक उत्पीडनको विमर्श पूरा हुनै सक्दैन । शरीर र सौन्दर्यसँग जोडिएको होओस् या श्रम र उत्पादनसँग, हरेक छलफलको तान पुरुषकेन्द्री राजनीतिभित्रै उनिएको छ । शरीरमा अधिकारको प्रश्न र स्त्री सौन्दर्यको मानकीकरण पितृसत्ताको शिरदेखि पुछारसम्म जोडिएका विषय हुन् । वर्ण र लिङ्ग भेदसँगै विकास भएका पितृसत्ताको रेखदेखमा निर्मित स्त्रीद्वेषी कानुन र संहिता (स्मृति) र मिथहरूले बताउँछन्, ‘सभ्य’ समाजको जगभित्र महिलाको कति ठूलो कोलाहल पुरिएको छ ! परिवार र राज्यसत्ताको ‘पुरुषकेन्द्र’ निर्माणको वेदीमा महिलाको आत्मसम्मान र गरिमा कसरी होमन भएको छ !
इतिहासको लामो मौन च्यातेर भाषाको उडानमा निस्केका नारीलाई नै दुनियाँभरका प्रश्न खडा गरेर किन परिवार र समाज भाँड्दै छौं, एक थान लोग्ने र सन्तानसुखको भोग अनि आदर्श ‘विदुषी’ नारी भएर बाँच्ने सुविधा छोडेर प्रश्नको जंगलमा किन छिरेको भनेर सोध्दा सुझाव दिइन्छ— स्त्री मुद्दामा मात्रै होइन, ‘समग्र मानवतावाद’का लागि पो बोल्नुपर्छ ! यस्तो सुझाव दिने ‘उच्च मानवतावादी’ पंक्तिले जवाफ दिऊन्– स्त्री सौन्दर्यको मापदण्ड बनाउने, स्त्रीलाई भोग्याका रूपमा पत्नी, उपपत्नी, यौनदासी, वेश्या, कोठे नर्तकी हुँदै मोडल र पोर्नस्टारसम्म बनाएर प्रभुत्वको राजनीति गर्दा, दिनदिनैका बलात्कार र हत्याको मोहरीमा नाबालिकादेखि वृद्धासम्मका ज्यानमा मा धावा बोलिँदा संसार कुन अर्थमा सभ्य र ‘मानवीय’ छ ?
'माल’ उत्पादनको खेल
हामीकहाँ ‘लोउनी छोराले हुप (बर्कत) ले खानी हो, आइमाईले रूपले’ जस्ता आहान प्रचलित छन्, जसले स्थानीय ज्ञान र चेतना निर्माणको जग के हो भन्ने बताउँछन् । यद्यपि यो तुलनात्मक रूपले कम अपमानजनक आहान हो । आर्थिक उत्पादन सम्बन्धको प्रभाव आम मानिसले बनाएका दैनन्दिनका भाष्यमा कस्तो छ भन्ने सामान्य उदाहरण मात्रै हो यो ।
समाजले योभन्दा कैयौं गुणा स्त्रीद्वेषी उखान र उक्तिको रचना गरेको छ । तिनले महिलालाई जबर्जस्ती राम्री देखिनुपर्ने, शरीरको छटनी–कटनी गर्नुपर्ने, नखरा र उत्तेजनाले पुरुषलाई मोहित पार्नुपर्ने मनोविज्ञान थोपरेका छन् । र अधिकांश महिला त्यही मनोवैज्ञानिक दासत्वमुनि खुसी–खुसी सहिद भइरहेका छन् ।
आर्थिक अधिकारबाट अपदस्थ भएपछि इतिहासमा महिलाका अगाडि पुरुषलाई रिझाएर बाँच्नुका विकल्पहरू थिएनन् । अब भने समयले ठूलो फड्को मारेको छ । उपभोक्तावादको सिकार हुनबाट बचेर एकसरो लाउन, एकपेट खान र मानवीय गरिमाको एउटा पूर्ण जिन्दगी बाँच्न पुरुषलाई रिझाएर जबर्जस्ती राम्री देखिनुपर्ने अवस्था आज छैन ।
तर सचेतना र आत्मसम्मानको क्रान्तिका असंख्य सम्भावना भएको आजको युगमा पनि पितृसत्ता महिलाको शरीर कब्जा गर्ने रणनीतिमा सफल छ । यसको रहस्य पितृसत्ताको संशोधित रूप पराराष्ट्रिय कर्पोरेट पुँजीवादभित्र भेटिन्छ । सुरुआत कालमा महिलालाई घरका दैला र गराला फड्काएर उद्योग, कारखाना, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पुर्‍याएको प्रगतिशील पुँजीवाद प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय र कर्पोरेट पुँजीवादमा रूपान्तरण भएपछि खानी, तेल, जलस्रोतजत्तिकै विशाल लगानीको बहुराष्ट्रिय बजार स्त्री शरीर र कस्मेटिक्सले धानिरहेको छ ।
त्यसलाई निरन्तर गतिशील बनाउन कम्पनी मालिकहरूलाई विज्ञापनमा खेलिदिने मोडल र प्रचारप्रसार गरिदिने असंख्य एजेन्ट चाहिन्छ । त्यस्ता एजेन्ट युट्युब र टेलिभिजन स्टार, सिनेमाका सेलेब्रिटी र सुन्दरी प्रतियोगिताका ‘जज’का रूपमा रहन्छन् । बहुसंख्यक नारी तिनैलाई आदर्श मान्छन् । तिनका मेकअप, पहिरन र हाउभाउको नक्कल गरेर आफू जमानासित ‘फिट’ भएकामा गर्व गर्छन् ।
सन् १९९१ मा प्रकाशित किताब ‘ब्युटी मिथ’मा अमेरिकी लेखक नाओमी उल्फ शरीरबारे बनाइएका तमाम सौन्दर्य मिथहरू पूर्णतः मर्दवादी पुँजीवादी मिथ हुन् भन्छिन् । यो मिथले पुरुष ज्यानले पराक्रमी, उद्यमशील र साहसी हुनुपर्ने तर्क गर्छ । महिलालाई भने थकित र सौखिन पुरुषको मन बहलाउने, उसलाई ऊर्जा र पुनर्ताजगी दिने केवल एउटा निरीह सेवाप्रदायक मान्छ । समकालीन बजारशास्त्रले पक्रेको गाँठी तर्क नै यही हो । यसले कुनै पनि तरिकाबाट महिलाको शरीर र सौन्दर्यका धारणामाथि पुरुष दृष्टिको वर्चस्व कायम हुनुपर्छ भन्छ ।
अर्थशास्त्रले उत्पादित भौतिक वस्तुलाई ‘माल’ भन्छ । त्यसको उत्पादन प्रणाली हुन्छ । सञ्चय र वितरणको प्रक्रिया हुन्छ । ग्राहकले पैसा तिर्छ र मालको उपभोग गर्छ । जबकि शरीर त जैविक अस्तित्व हो ! तथापि स्त्री शरीर आजको नाफाखोर व्यापार नेटवर्कको गतिशील अस्त्र बनेको छ । यो सौन्दर्य र यौनको यस्तो परियोजनाद्वारा सञ्चालित छ, जसमा शरीर पुँजी निर्माणको वस्तु र माध्यम दुवै बनेको छ ।
विगतमा सामन्तवादले स्त्री शरीरमाथि भयानक हिंसा र कोप बर्साएको सत्य हो, तथापि त्यसले शरीरको हाटै लगाएर विशालतम व्यापार संयन्त्र बनाएन । आजको बहुराष्ट्रिय पुँजीवादले भने सिनेमा, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालदेखि सहरका चोक, गल्ली र वातानुकूलित कोठीसम्म देहबजार फिँजारेको छ । त्यहाँ रेट अनुसार महिलाहरूको ‘हाइरार्की’ छ ।
यसमा सहरको मध्यचोकवरिपरि आफूलाई लिलाम गर्न टहलिइरहेका यौनकर्मी युवतीदेखि हाई प्रोफाइलहरूलाई सेवा दिने ‘सेक्स वर्कर’ सम्मलाई किन्ने खरिदार, प्रमोसन र प्रसिद्धिका तिर्खालु महिलाका लागि यौन सम्बन्धको च्याँखे थापेर मौका पर्खने ‘बोस’, ‘कास्टिङ काउच’ रच्ने सिनेमा जगतका निर्माता–निर्देशक लगायत रासलीलाकार र मोडल, सुन्दरी उत्पादन गर्ने अधिकृत व्यापारिक घरानाहरूको क्रियाशील भूमिका छ ।
नेपालमा हुन लागेको सुन्दरी प्रतियोगिताको एउटा अडिसन क्लिपले केही दिनअघि प्रतियोगिताभित्रको कुरूप पाटोलाई दुनियाँसामु छताछुल्ल पारिदियो । भिडियोमा कुनै शृङ्गार नगरी, पावरवाला चस्मा लगाएकी युवतीलाई ‘मेकअप नगरी किन आएको ?’ भनी निर्णायकले झन्डै थर्काएको शैलीमा सोधिन् । ती युवतीलाई सौन्दर्यको ‘डिसरेस्पेक्ट’ नगर्न चेतावनी दिँदै उनले चस्माको सट्टामा ‘कन्ट्याक्ट लेन्स’ लगाएर आउन सुझाइन् ।
भिडियोमा टिप्पणी गर्नेमध्ये धेरैले ती निर्णायक महिलामाथि आक्रोश पोखे । यो स्वाभाविकै हो । फेरि पनि खास कुरा पुँजीवादी मापदण्डको सौन्दर्यशास्त्रका निर्माता को हुन् भन्ने नै हो । निर्णायकका रूपमा बसेकी महिला देह–राजनीतिकी एउटी ‘प्यादा’ मात्रै हुन् । खास कर्ता त देहको हाटबजार चलाउने व्यापारिक घराना हुन्, ठूलठूला बहुराष्ट्रिय र वित्तीय कम्पनी हुन् । स्थानीय आयोजक पनि एजेन्ट माक्रै हुन् । त्यसैले अमुक व्यत्तिमाथि प्रकट गरिने आक्रोशको खास अर्थ छैन । विरोध त स्त्रीदेहलाई व्यापारको वस्तु बनाएर पूरै विश्व समाजलाई अमानवीय र हिंस्रक बनाइरहेको पुँजीवादी पद्धतिको पो गर्नुपर्छ !
सन् १९२० मा सुरु सुन्दरी प्रतियोगिता साठीको दशकयता विरोधको तारो बन्न थाल्यो । १९६८ देखि नारीवादी अभियन्ताको चर्को विरोध खेप्न थालेको ‘ब्युटी प्याजेन्ट’ को नेपाली संस्करण १९९४ मा सुरु भयो । नेपालमा वामपन्थी महिलाहरूको संगठित विरोध शृङ्खला ‘नेपाल सुन्दरी’को पहिलो संस्करणसँगै सुरु भयो । अहिले सबै संगठन मानौं चुप छन् ।
केही लेखक र सामाजिक सञ्जालमा क्रियाशील मानिसहरूबाहेक संगठित र उल्लेख्य विरोधको स्वर सुनिन्न । नेपाली समाजमा सचेत विद्रोहको धार भुत्ते भइरहेको स्पष्ट संकेत हो यो । अब कसैलाई संगठित विरोध किन गर्नु छैन भने अधिकृत बहुराष्ट्रिय पुँजीवादसँग नेपालका प्रायः कम्युनिस्टले सम्झौता गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय त ‘कमरेड–पुत्री’ नै झन्डै विश्व सुन्दरी बन्न पुगिन् ! सौन्दर्यको पुनर्परिभाषा गर्ने इमानदार प्रयत्न थाल्ने हो भने यो विषयमा खुला र आमने–सामनेको बहस अनिवार्य छ ।
नाओमी उल्फका अनुसार, पुरुषवादी सौन्दर्यशास्त्रको माकुरी जालबाट निस्कन नारीवादी सौन्दर्य मिथको यस्तो परिभाषा बनाउनुपर्छ, जसले शरीरमाथि नारीकै अधिकार स्थापित गर्नुलार्ई प्राथमिक सर्त मानोस् । शरीर, यौन, विवाह लगायतका निजी मामिलामा व्यापक रूपले छनोटको पूर्णाधिकार स्थापित गर्न सक्ने हो भने सौन्दर्यको स्वतः पुनर्परिभाषा हुँदै जान्छ । यति कुरा जोकसैले बुझ्छ— सौन्दर्यको पुनर्परिभाषा वास्तवमा सत्ताको पुनर्परिभाषा हो ।
पितृसत्तालाई धूलिसात् पारेर लैंगिक समताको वास्तविक अर्थमा ‘मानवतावादी’ सत्ता स्थापित गर्ने तर्क हो यो । यसो गर्न महिलाहरू कुनै पनि सर्तमा देहलाई पैसा र प्रसिद्धिसित साट्न मन्जुर हुनु हुँदैन । हामी कागजका पुतली र भोगका वस्तु हुन राजी छैनौं भनेर आजसम्म चलेको सौन्दर्य मिथलाई खारेज गर्न तयार हुनुपर्छ । तथाकथित ‘सुन्दरी प्रतियोगिता’ हाम्रो विवेक र स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप हो र यसमा झुक्किएर पनि प्रतियोगी बन्दैनौं भनेर आयोजकलाई चुनौती दिन सक्नुपर्छ ।
हामी यति आँटिला बन्न तयार छौं ?
प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०८:१३
प्रलेस: आन्दोलन कि ट्याग
चैत्र १९, २०७५ सरिता तिवारी
काठमाडौँ — अब समय आएको छहाम्रा सम्बन्धहरू स्वीकार गरौंर झूलभन्दा बाहिर निस्केर लडौं विचारको लडाइँ  । – पाश, बीच का रास्ता नहीं होतावामपन्थी लेखकहरू विभाजित ! समाचार आयो  । प्रगतिशील लेखक संघको इतिहासमा पहिलोपल्ट एकैसाथ ३८ लेखकले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत बगावत गरे । विज्ञप्तिको मजबुन छः प्रलेसको मूल नेतृत्व सत्ता–संरचनाको कृतदास भयो । यसले इतिहासदेखिको आफ्नो ‘प्रगतिशील लिगेसी’ गुमाउँदै गयो ।
पार्टी प्रभुत्वलाई प्रलेस सञ्चालनको तजबिजी दिइयो । भाषिक/सांस्कृतिक समावेशिता र अग्रगामी विचारलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरियो ।फरक विचार राख्ने, वैचारिक बहस गर्नेलाई अपमानित गर्ने, दुत्कार्ने प्रवृत्ति हावी भयो ... ।
के यी कुराका लागि प्रलेसबाट लेखकहरूको घोषित बहिर्गमन नै जरुरी थियो ? के यी विषयमा प्रश्न उठाउने र बहस गर्ने ‘स्पेस’ त्यहाँभित्र नभएकै हो ?यिनै आधारमा प्रलेसभित्रको सबैभन्दा सिर्जनशील मानिसको दस्ताले प्रलेस छाडेर अर्को साझा मोर्चा चाहिएको तर्क गर्नुपर्थ्यो कि अझै विकल्पजीवित थिए?
प्रलेस के हो ?
प्रलेस अर्थात् प्रगतिशील लेखक संघ धेरै देशमा क्रियाशील वामपन्थी लेखकहरूको संगठन हो । यसको स्थापना फ्रान्सको पेरिसमा भएको हो । सन् १९३४ मा पेरिसमा भेला भएका लेखकहरू म्याक्सिम गोर्की, रोमा रोला, थोमस मुन लगायतले विश्वव्यापी संगठित साहित्यिक आन्दोलन सुरु गरेका थिए, जसलाई नाम दिइएको थियो–प्रोग्रेसिभ राइटर्स एसोसिएसन ।
रूसी कम्युनिस्ट सरकारको तत्त्वावधानमा भर्खरै रसियाली लेखक संघको पहिलो अध्यक्ष बनेका गोर्कीसहितको यो मण्डलीको गतिलो प्रभाव पर्‍यो । भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनको उत्कर्षतर्फ बढ्दै गइरहेका बेला प्रेमचन्द,मुल्कराज आनन्द, सज्जाद जहिर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, श्रीपाद अमृत डाँगे लगायत ख्यातनाम लेखक यसमा समाहित भए ।
उपनिवेशवादविरोधी आन्दोलनका सिलसिलामा संगठित जनसाहित्यको प्रसारमा लागेका कतिपय भारतीय लेखक कम्युनिस्ट ब्रान्डको प्रलेसमा आबद्ध हुनु संयोग मात्रै पनि हुन सक्थ्यो, तथापि भारतमा प्रलेसले एउटा गौरवशाली पदचाप छाड्यो । साम्राज्यवाद, उपनिवेशवादविरुद्ध उठेको स्वतन्क्रता संग्राम र त्यहाँका बौद्धिक–राजनीतिक घटनात्रमबाट नेपाली युवा विद्यार्थीमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु अपेक्षित थियो । त्यसमाथि चिनियाँ कम्युनिस्ट क्रान्तिको पनि आलो प्रभाव छँदै थियो । फलस्वरूप राणातन्त्रको समाप्तिपछि श्यामप्रसाद शर्माको अगुवाइमा वीरगन्जमा भेला सम्पन्न गरीप्रलेस जन्म्यो । यो संवत् २००९ को कुरो हो । यसको तत्कालीन लक्ष्य युवा लेखकहरूलाई संगठित गरेर जनवादी साहित्यको प्रचार गर्नु थियो ।
संवत् २०१० तिर काठमाडौंमा पनि प्रलेस स्थापनाको पहल भएको भन्ने इतिहास भेटिन्छ, जसमा सिद्धिचरण श्रेष्ठ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, विजय मल्ल, शंकर लामिछाने, कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान आदिको नाम जोडिएर आउँछ । तारानाथ शर्मा, धर्मराज थापा, कमल दीक्षित लगायत समेत प्रलेसभित्र थिए ।
वर्ग पक्षधरताको स्पष्ट प्रावधान नहुनाले नै हुनुपर्छ, स्थापनाकालमा पुँजीवादी प्रगतिशीलसमेत प्रलेसभित्र समेटिए । ‘प्रगतिशीलतालाई अँगाल्ने तर प्रगतिवादलाई लघार्ने... अराजक र अवसरवादी प्रवृत्ति हावी भएका कारण’ प्रलेसको पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि ‘देब्रे ढल्कुवामात्रै बन्ने तर राजनीतिक दलविशेषको नियन्त्रण नचाहने’ भन्ने लेखक असुविधामा परे । जब संगठित पक्षधरताको आग्रह धेरै बलियो बन्न थाल्यो, त्यसपछि केही लेखक राजीनामा दिएरै बाहिरिए ।
२०१७ पुसदेखि पञ्चायत थालिएसँगै लोकतान्त्रिक राजनीति संकटमा परेपछि अवरुद्ध भएको प्रलेस २०३५–३६ सालमा बल्ल बौरियो । यसपटकको पुनर्गठनमा प्रलेसलाई प्रलेक सङ्घ (प्रगतिशील लेखक कलाकार सङ्घ) को रूप दिइयो । २०४४ सालमा पुनः प्रलेसकै नाममा पुनर्गठन भएयता प्रलेसका दस वटा सम्मेलन भैसकेका छन् र यो अहिले एघारौं सम्मेलनको सङ्घारमा छ ।
२०३६ सालदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध लेखकहरूको साझा मोर्चाका रूपमा विकसित गरिएपछि यो प्रायः संगठित वाम लेखकको मात्रै संस्था बन्यो । कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा असंगठित तर विचारले मार्क्सवाद प्रतिबद्ध लेखक नै नअट्नु प्रलेसको उल्लेख्य सीमा थियो । त्यो सीमा अहिलेसम्म कसैले भत्काउनसकेको छैन, त्यस्तो प्रयत्न भने धेरैपल्ट भएको छ । यद्यपि प्रलेसभित्र रहँदैमा प्रगतिशील बनिने अन्यथा नबनिने भन्ने होइन, तथापि पार्टीसम्बद्ध कतिपय लेखकभन्दा धेरै गुणा प्रतिभाशाली र सिर्जनशील लेखकहरू प्रलेसभन्दा बाहिरै रहनु ‘प्रगतिशील’ हरूका लागि सुहाउँदो कुरा थिएन ।
यस दौरान प्रलेसमा आमने–सामने बहस, विवाद, अखबारबाट प्रतिकार र गम्भीर आरोप–प्रत्यारोप आदि हुँदै आएका हुन् । यो शृङ्खला पारिजात–मोदनाथ प्रश्रित हुँदै आजसम्म तन्किन्छ । प्रलेसको आन्दोलनात्मक स्वभाव र चरित्र जीवित हुन्जेल साना–ठूला विवाद, बहस र असम्मतिलाई नै मुद्दा बनाएर यत्रो ठूलो संख्यामा प्रलेस छाडेर बाहिर निस्कने स्थिति आएको थिएन । यस्तो यसैपटक भयो । उसो भए अहिले नै किन त ? के त्यस्तो कारण पर्‍यो, राष्ट्रिय सम्मेलनको मुखैमा प्रलेसको मूल नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोपसहित अर्को साझा संगठन खोल्ने तयारी गर्दै यसभित्रका लेखक बाहिरिए ?
'पश्चयात्रा कि अग्रगमन'को घर्षण?
प्रगतिशीलताको मानकविपरीत पश्चयात्रा रोज्ने कि जुगले तय गरेको अग्रगामी बाटो पक्रिने ? अहिले प्रलेसको मुख्य घर्षण यही हो। आजको विवादको विषय ‘सरकारी प्रगतिशील’ हरूले आरोप लगाएजस्तै केही व्यक्तिका पद, स्थानमान वा अन्य कुनै लुकेको प्रस्ताव पूर्ति नहुँदाको परिणति होइन,नत नेतृत्वले विज्ञप्तिमार्फत भनेजस्तै निष्क्रियहरूको अरण्यरोदन नै हो ।
यो इतिहासको जटिल मोडमा मार्क्सवादी आदर्श मान्ने, आलोचनात्मक बहस मनपराउने लेखकहरूले आफ्नै गालामा झापड हानेर, आफूलाई झकझक्याएर बाटो छुट्टिएको बेला हो । यो मूलतः सत्तापक्षीय भक्तिमार्गसित आमने–सामने भई गरिएको वैचारिक लडाइँको अभिव्यक्ति हो ।
देशभित्र रहेका वामपन्थी पार्टीसम्बद्ध लेखकहरूको संगठन (सबै वामपन्थीको साझा भने होइन) भएकाले प्रलेसको जीवनमा सम्बन्धित पार्टीका राजनीतिक–सांस्कृतिक धारणा र धरातलले अर्थपूर्ण स्थान राख्ने गर्छन् । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दै आए पनि तीमध्ये प्रायः कम्युनिस्ट मूल्य र आचरणको प्रगतिशील रूपान्तरित संस्कृति निर्माण गर्न असमर्थ छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसबाट प्रगतिशील भनिने लेखकहरूसमेत अछूतो छैनन् ।
ठूला दुई ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीको एकतापछि यो संकट झनै चुलिएको छ । निकट अतीतको ‘क्रान्तिकारी’ र धर्मनिरपेक्षता लगायत भाषिक–सांस्कृतिक समावेशी,सहभागितामूलक लोकतन्क्रको हिमायती शत्तिले नीतिगत विसर्जनको बाटो समाएपछि मरणशील महेन्द्रपन्थी राष्ट्रवाद ‘कम्युनिस्ट’हरूकै खोपीमा पुजिन थाल्यो । यो विपथगमनले सांस्कृतिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसलाई बढारेर लैजानु निश्चित थियो ।
‘हिमवत्‌खण्ड कला साहित्य सम्मिलन’ त्यसैको सांस्कृतिक प्रहसन थियो । यो प्रहसन गैरमार्क्सवादी र गैरप्रगतिशील त हुँदै हो,कांग्रेस र पञ्चहरूलाई समेत जिल्याइदिने गरी गरिएको पश्चगामी अभ्याससमेत हो । राज्यसंरक्षित यस्ता अनुष्ठानमा पलेँटी कसेर सहभागी हुने मानिसले साहित्य उत्सवमा भाग लिएर आलोचनात्मक बहस गर्नेहरूको निन्दा गर्नु हास्यास्पद छ ।
राज्यसत्ताको चरित्रअनुसार बौद्धिकहरूको चरित्र निर्धारित हुने सामान्य नियम ‘कम्युनिस्ट र प्रगतिशील’ शक्तिले चलाएको सत्तामा पनि स्पष्ट देखिएको छ । चरम दलालपन्थ र सामन्तवादी सांस्कृतिक अभ्यासमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारी कम्युनिस्ट वृत्तले यस्तो चाबी निर्माण गरेको छ, जसमा मार्क्सवादी र सामन्तवादी दुवै विचार एकै ठाउँमा अट्छन् ‘सरकारी दृष्टिको त्यो चाबीभित्र फिट भएकाको आँखाबाट आजका सबै खाले विचलनमाथि आलोचना गर्ने लेखकजतिजम्मै ‘डलरमा बिकेका’देखिन्छन् ।
जातीय र सांस्कृतिक उत्पीडनविरुद्ध लेख्नेहरू ‘विखण्डनवादी र राष्ट्रवादविरोधी’ बन्छन् । महिलाको अधिकार र आत्मसम्मानका पक्षमा उभिनेहरू ‘पश्चिमा हन्डी खाएर’ बोलिरहेका देखिन्छन् । सत्ता अनुकूल दृष्टिको यही चाबीले यतिखेर प्रगतिशील लेखक संघलाई बन्धक बनाएको छ ।
प्रलेस विवादको मूलविन्दु संगठनात्मक जीवनका सामान्य भनाभन र आरोप–प्रत्यारोपमा छैन । यसको विन्दु वैचारिक–सांस्कृतिक विपथको दोबाटामा छ । अब सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनका घोषित अजेन्डामुताबिक, प्रलेसको विधानमा उल्लिखित उद्देश्य र कार्यक्रम मुताबिक अगाडि बढ्ने कि सत्तासंरक्षित पश्चयात्रामा सरिक हुने ? पहाडे, पितृसत्तात्मक, हिन्दुवादी एकात्मक राष्ट्रवादमा सङ्कुचन हुँदै बाउन्निने किसबैको साझा उदात्त र सहिष्णु राष्ट्र निर्माणका विविध बहसलाई जोड्दै अनि प्रश्न र विमर्शको स्थानलाई सुरक्षित गर्दै फैलँदै जाने ? यी प्रलेसका लागि निर्णायक सवाल थिए ।
यिनको उत्तर खोज्ने प्रयत्न प्रलेसभित्र नगरिएको होइन, तर नियोजित तरिकाले नै भिन्न मत राख्ने सदस्यलाई कारबाही गर्ने र निष्कासन गर्ने धम्की दिन थालेपछि प्रलेसमा निहित ‘साझा सांस्कृतिक आन्दोलन’ को विम्ब भत्किँदै गएको छर्लङ्ग छ । यस सन्दर्भमा पंक्तिकारकै पहलमा चितवनमा गरिएको ‘माङ्गेना मन्थन’ लाई जिम्मेवार नेतृत्वले नै ‘राष्ट्रवादविरोधी’ किताबमाथिको बहस तुरुन्त रोक्न र नरोके अन्यथा हुनसक्ने चेतावनी दिएको घटना नै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
प्रलेस एउटा साहित्यिक संस्थामात्रै होइन, सांस्कृतिक आन्दोलनको नाम पनि हो । प्रतिरोध र निरन्तर बहस यसको जीवन्तता र अस्तित्वको सार हो । यसको मूल्यरक्षा सम्बद्ध सबैको चिन्ता र सरोकारको विषय हुनुपर्ने हो, त्यसो भएन । प्रगतिशील सांस्कृतिक मूल्य र आन्दोलनको रक्षा गर्ने प्रस्तावनालाई कुल्चेर केवल नाम र ट्यागको प्राविधिक रक्षा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
जसरी सत्ता सञ्चालकहरू दलाल पुँजीवाद, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्यायप्रति पूर्णतया विमुख र आलोचनात्मक चेतनाप्रति असहिष्णु भएर पनि ‘कम्युनिस्ट’ भनाउन सक्ने सुविधाको उपभोग गरिरहेका छन्, त्यसै गरी महेन्द्रपथीय पञ्चायती राष्ट्रवादको स्तुति, पितृसत्तात्मक, सामन्तवादी रुढिग्रस्त र धार्मिक अतिवादका पक्षपाती भएर पनि प्रलेसभित्रको निर्णायक पंक्ति ‘प्रगतिशील’ भैरहन सक्ने सुविधाको उपभोग गरिरहेको छ । प्रलेसका आम इमानदार सदस्यले बुझ्न जरुरी छ– अहिले प्राविधिक रूपले प्रलेस तिनै मानिसको कब्जामा छ । यतिखेर पनि प्रलेसभित्रै बिनाप्रश्न चुपचाप रहिरहनु तिनैको सत्ताप्रजनित ‘दुईतिहाइवाला’ दम्भ र अधोगतिशील नेतृत्वको दासत्व स्वीकार गर्नु हो ।
यो वास्तविक प्रगतिशील आन्दोलनको रक्षा गर्ने कि ‘प्रलेस’ नामक आलंकारिक ट्यागकोभन्ने निश्चित गर्ने समय हो । कवि पाशले भनेजस्तै यो सुरक्षाका तमाम खोलबाट बाहिर निस्केर विचारको लडाइँलाई आत्मसात् गर्ने समय हो ।
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७५ ०८:१५